सेयर बजारबाट मनग्य कमाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ५ टिप्स «
सेयर बजारबाट मनग्य कमाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ५ टिप्स
प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७७, शनिबार १८:४४
काठमाण्डौ । पैसा कमाउने सोच बनाउनुभएको छ भने आवश्यक छैन कि तपाइँले ठूलो रकमबाटै कुनै काम सुरु गर्नुपर्छ। किनकि थोरै लगानीबाट पनि मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि सेयरबजार उपयुक्त हुन सक्छ।
सेयरबजारमा थोरै लगानी गरेर मनग्य कमाउन केही आधारभूत नियममा भने अवश्य ध्यान दिनुपर्छ। यी यस्ता नियम हुन्, जसलाई विश्वका ठूलठूला लगानीकर्ताहरुले सुरुमा सेयर बजारमा प्रवेश गर्दा अपनाए र अहिले विश्वकै धनाढ्यको सूचीमा पर्न सफल भएकाछन्।
सेयर बजारबाट मनग्य आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यी ५ गोल्डेन टिप्समा आवश्य ध्यान दिनुहोस्। जसले तपाइँलाई थोरै लगानीबाट पनि कम समयमै करोडपति बनाउन सक्छ।
वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला र आके दमानीजस्ता सेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरुले पनि यी टिप्स अपनाएका थिए। यी सूत्रका कारण यी दिग्गजहरुले सुरुआती लगानीलाई कैयौँ गुणा बढीले बढाउन सफल भइसकेका छन्।
पहिलो टिप्स : उचित समय नपर्खनुहोस्
वारेन बफेटका अनुसार सेयर बजारमा लगानीका लागि हरेक समय उचित हुन्छ। त्यसैले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न उत्तम समय भनेर कुरिरहनुहुन्न। यदि कुनै राम्रो कम्पनीको सेयरको मूल्य मुनासिब छ भने लगानी गरिहाल्नुहोस्। आमा मानिस सही समयको पर्खाइमा बजारमा लगानी गर्दैनन्। तर जब समय बित्छ तब बजारले उचाइ चुमिसकेको हुन्छ। अनि त्यतिबेला लगानीकर्ता घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो टिप्स : अरुको हेरेर लगानी नगर्नुहोस्
यदि तपाइँ केवल यो कारणले सेयरमा पैसा लगाउँदै हुनुहुन्छ कि अरुले पनि त्यही सेयरमा पैसा लगाउँदैछन् भने हुन सक्छ तपाइँले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर बजारमा सफल हुनको एउटा मन्त्र यो हो कि तपाइँ अरुलाई नपछ्याउनुहोस्। तर अरुले तपाइँलाई पछ्याउन्। वारेन बफेटका अनुसार जब अरुले ‘फाइदा हुन्छ’ भनेर तपाइँलाई भन्छन् सतर्क हुनुहोस् किनकि गलत निर्णयले तपाइँको सर्वश्व गुम्न सक्छ।
तेस्रो टिप्स : मूल्य होइन भ्याल्यू हेर्नुहोस्
जहिले पनि सेयरमा पैसा लगाउनुअघि यो नसोच्नुहोस् कि सेयरको मूल्य बढी छ भने राम्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा ५० बाट १०० रुपैयाँको बीचको मूल्य भएको सेयर पनि धेरै मूल्यवान हुन सक्छ, यदि त्यो कम्पनीको प्रदशृन राम्रो छ भने। सेयरबजारका ठूला लगानीकर्ता राकेश झुनझुनवालाका अनुसार कुनै पनि सेयरमा पैसा लगाउनुभन्दा पहिले कम्पनीको प्रदर्शन हेर्नुपर्छ। यदि कम्पनीको प्रदर्शन राम्रो छ भने सेयरमूल्यमा हुने उतारचढावले तपाइँलाई कुनै समस्या पार्ने छैन।
चौथो टिप्स : लाभांश दिने कम्पनीको विश्वास गर्नुहोस्
विज्ञहरुका अनुसार लगानी गर्नुअघि यो विचार गर्नुपर्छ कि कुन कम्पनीहरुले नियमित लाभांश दिइरहेका छन्। यदि कुनै कम्पनीले नियमित लाभांश दिइरहेको छ भने यसको मतलब हो त्यो कम्पनीसँग क्यासको कुनै कमी छैन। क्यास सरप्लस भएका कम्पनीले जहिल्यै राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। यस्तो यी कम्पनीको सेयरमूल्यमा बढी उछाल आउने सम्भावना हुन्छ र तपाइँको लगानी दिन दुईगुणा रात चौगुणाले बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
पाँचौँ टिप्स : कम कर्जा भएका कम्पनीहरु छनोट गर्नुहोस्
लगानी गर्नुअघि यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि कुन कम्पनीको कर्जा कम छ। कर्जा कम हुने कम्पनीमाथि क्यासलाई लिएर हुने दबाब हुँदैछ। – एजेन्सी